अरुतिर एमाले अगाडि, मेचीनगरमा काङ्ग्रेससँग टक्कर « Loktantrapost
अरुतिर एमाले अगाडि, मेचीनगरमा काङ्ग्रेससँग टक्कर
१५ असार २०७४, बिहीबार २२:२२
झापा, १५ असार । झापाको १५ वटै स्थानीय तहमा जारी मतगणनामा नेकपा एमालेले अग्रता लिएको छ ।
विहीवार राति अबेरसम्मको परिणाम अनुसार कतै नेपाली काङ्ग्रेस र कतै नेकपा माओबादी र राप्रपाले एमालेलाई अधिकांश ठाउँमा पछ्याइरहेको अवस्था छ ।
मेचीनगरमा कडा टक्कर ः
मेचीनगरमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वारविच कडा टक्कर देखिएको छ ।
पहिलो एक सय मत गणना हुँदा नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेद्वार विष्णु प्रसाइँले ३८ मत प्राप्त गरेका थिए भने नेपाली काङ्ग्रेसका सोही पदका उम्मेद्वार विमल आचार्यले पनि ३८ मत नै प्राप्त गरे ।
दुई सय मत गणना हुँदा समेत प्रसाइँ र आचार्यको टक्करको काँटा बद्लिएन । दुबैले ७८÷७८ ल्याएका थिए ।
तीन सय मत गणना हुँदा भने नेकपा एमालेका मेयर उम्मेद्वार प्रसाई (१२२) र उपमेयरकी उम्मेद्वार उप्रेती (१२२)ले अग्रता लिन सुरु गरेका थिए ।
आचार्यले ११९ र खतिवडाले ११८ मत ल्याएका छन् ।
नेकपा माओबादी केन्द्रका मेयरका उम्मेद्वार हंशलाल राजबंशी र राप्रपाका उम्मेद्वार रमेश दाहालले प्रतिष्पर्धात्मक मत ल्याउन सकिरहेका छैनन् ।
राप्रपाका दाहालको घर नै बाहुनडाँगी भए पनि उनले आशा गरे अनुरुप मत ल्याउन सकेनन् भने माओबादी केन्द्रका मेयरका उम्मेद्वार राजबंशीले बढी मत पाउन यस पछि गणना हुने वडा नं. १५ को परिणाम कुर्नु पर्ने भएको छ ।
मेचीनगरको वडा नं. १ बाहुनडाँगीबाट मत गन्न सुरु गरिएको छ । १ नंं वडा सकिएपछि वडा नं. १५ ज्यामिरगढीको मत गणना गरिने भएको छ ।
उपमेयरका उम्मेद्वार मीना उप्रेती (एमाले) र दुर्गा खतिवडा (कांग्रेस)विच पनि उस्तै टक्कर परिरहेको छ । दुई सय मत गणना हुँदा खतिवडाको ७९ मत पुगेको छ भने उप्रेतीको ७६ मत आएको छ ।
झापामा ८ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेका छन् । चार नगरपालिका बाहेक सबै तहमा बुधवार राति नै गणना सुरु भएको थियो ।
मेचीनगर, बुद्धशान्ति, शिवसताक्षी र विर्तामोडमा विहीवार मात्र गणना सुरु भएको हो ।
भद्रपुरमा कांग्रेस सशंकित ः
नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको गृहनगर भद्रपुर नगरपालिकामा बुधवार रातिदेखि नै गणना जारी छ ।
सम्भवत ः झापामो सबैभन्दा छिटो यही नगरको अन्तिम परिणाम आउने छ । यहाँ द्रुत रफ्तारमा कुनै अवरोध बेगर गणना कार्य अघि बढिरहेको छ ।
तर चुनावी प्रारम्भिक नतिजा कांग्रेसका लागि नमज्जाको छ ।
गणनाको सुरुदेखि नै नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेद्वार जीवन श्रेष्ठ र उपमेयरका उम्मेद्वार चन्द्रा श्रेष्ठले भारी अग्रता लिइरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका मेयरका उम्मेद्वार गणेश पोखरेल दोस्रो स्थानमा र माओबादी केन्द्रका उम्मेद्वार शिवराज राजभण्डारी तेस्रो र राप्रपाका राजु पनेरु चौथो स्थानमा दगुरिरहेका छन् ।
उपमेयरमा नेकपा एमालेकी चन्द्रा श्रेष्ठले कांग्रेसकी उम्मेद्वार तारा भुर्तेलभन्दा निकै धेरै मत ल्याइसकेकी छन् ।
मुचुल्का देखाउन ढिलाई ः
झापाको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका मेचीनगरमा विहीवार १२ बजेपछि मात्र मतगणना सुरु भएको थियो ।
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालयको सबैभन्दा माथ्लो तलाको हलमा निर्वाचन आयोगका कर्मचारी, दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका प्रतिनिधिहरु, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायतको रोहवरमा मध्यान्ह १२ः१० बजे गणना प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।
गणनास्थल सुरु गर्दा निर्वाचन अधिकृत इन्दिरा शर्मा, मेचीनगर नगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत पशुपति खतिवडा, सशस्त्र नायव प्रहरी उपरीक्षक बासुदेव लोहनी, नेपाल प्रहरीका नायव प्रहरी उपरीक्षक दुर्गा रेग्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
विहीवार विहान ८ बजे गणना सुरु गर्ने भनिए पनि विहान बसेको सर्वदलीय बैठकले ११ बजे मात्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर ११ बजे गणना प्रक्रिया सुरु गर्न लाग्दा दलका प्रतिनिधिहरुले मतपेटिकाको मुचुल्का हेर्न खोज्दा आयोगले तत्काल देखाउन सकेन । त्यहीकारणले एक घण्टासम्म ढिलाई भएको हो ।
एक घण्टापछि निर्वाचन अधिकृत इन्दिरा शर्माले मतपेटिकाको मुचुल्का देखाए पछि १२ः१० बजे मात्र दलहरु सन्तुष्ट भएर गणना सुरु गर्न राजी भएका थिए ।
हस्ताक्षर नभएका ३५ मत बाकसमा ः
बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका मेयरका उम्मेद्वार चिन्तन पाठकले अग्रता लिएका छन् ।
विहीवार रातिसम्मको परिणाम अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका मेयरका रमेश भुजेलको भन्दा माओबादी केन्द्रका उम्मेद्वार पवन तिम्सिनाले बढी मत ल्याएका छन् ।
तर यहाँ पनि विहान ७ बजे मतदान सुरु हुन सकेन । वडा नं. १ को नमुना निमाविका ३५ मतमा मतदान अधिकृतले हस्ताक्षर नगरको कुरा बुधवारै बाहिर आइसकेका कारण त्यसको छिनोफानो गर्न लामो समय सर्वदलीय बैठक बस्नु परेको थियो ।
निर्वाचन अधिकृतले हस्ताक्षर नभएका मत बदर मानिने बताएपछि सर्वदलीय बैठक त्यही निष्कर्षमा पुगेको थियो र ढिलोगरी मतगणना सुरु भएको थियो ।
विवाद भएका कारण गणना कार्य वडा नं. ७ बाट सुरु गरिएको थियो । हस्ताक्षर नभएका ३५ मत वडा नं. १ को मतपेटिकाभित्र पसिसकेको छ । त्यसको गणनाको पालो आएको छैन ।
दमकमा पनि एमाले नै अगाडि ः
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको गृहनगर दमकमा सुरुमा माओबादी केन्द्रका मेयरका उम्मेद्वार गगन पुरीले अग्रता लिएर समाचारमा निकै छाए पनि पछि नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रोम ओलीले उनलाई उछिनेका छन् ।
पहिलो पटक नतिजा सुनाइँदा माओबादी र दोस्रोचोटी सुनाउँदा एमालेका उम्मेद्वारहरुले अग्रता लिएका थिए ।
तर तेस्रोचाटी नतिजा सुनाइँदा भने राप्रपाका मेयरका उम्मेद्वार राम थापाले दोस्रो स्थानमा हक जमाउँदै एमालेका ओलीलाई टक्कर दिइरहेका छन् । राप्रपाले दमकको वडाहरुमा राम्रो परिणाम ल्याएको छ ।
महिला मेयर पनि अगाडि नै ः
मेयर पदमा महिला उम्मेद्वार उठाएको दुई गाउँपालिका कमल र हल्दिबारीमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरु क्रमश ः मेनुका काफ्ले र मञ्जु सिटौलाले अग्रता लिइरहेका छन् ।
काफ्लेलाई कांग्रेसका हुकुमसिंह राई र सिटौलालाई राप्रपाका रविन्द्र लिङ्देनले टक्कर दिइरहेका छन् ।
अर्जुनधारा, शिवसताक्षी नगरपालिकामा एमालेका मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वारहरुले नै अग्रता बढाइरहका छन् । यी नगरमा अरु दलका उम्मेद्वारहरुलाई एमालेका उम्मेद्वारहरुले निकै पछाडि छाडेका छन् ।